Isikuta Esikagesi, Isibhamu Semisipha, Isithuthuthu Sokuqina - IJinbang
I-Freestyle scootering (eyaziwa nangokuthi i-scootering, i-scooter riding, noma ukugibela nje) umdlalo owedlulele obandakanya ukusebenzisa ama-stunt scooter ukwenza ama-freestyle tricks afana ne-bicycle motocross (BMX) ne-skateboarding. Kusukela ekuqaleni kwezemidlalo ngo-1999, ama-stunt scooter aguquke kakhulu. Isibonelo, inkampani ye-scooter Razor isukile kokukhiqiza amamodeli ajwayelekile we-Razor A yabuye yenza ama-scooter akhelwe ngokwezifiso futhi afaka izingxenye ezivela kwezinye izinkampani. Njengoba lo mdlalo ukhula, kwasungulwa amabhizinisi nezinhlelo ukuxhasa ukukhula komphakathi oshaya izikole. Isibonelo sohlelo lokusekelwa kusenesikhathi yizinkundla zeScooter Resource (SR), ezisize ukukhulisa umphakathi wezikole ngokuxhumanisa abantu abanentshisekelo yokuqola ngo-2006. Ngenkathi i-scootering yaziwa kakhulu, kwaba nesidingo sezingxenye ezinamandla zangemva komakethi nezitolo zezikuta thwala lezo zingxenye.
Izikuta zokukhahlela ezisebenza ngogesi ngokuvamile zidlule izikuta ezisebenza ngogesi ngokuthandwa kusukela ngo-2000. Imvamisa zinamasondo amancane amabili aqinile, ane-chassis egoqekayo, imvamisa i-aluminium. Abanye abakhahlela izithuthuthu banamasondo amathathu noma amane, noma enziwe ngepulasitiki, noma makhulu, noma awagoqeki. Izikuta zokukhohlisa ezenzelwe abantu abadala zinamasondo angaphambili amakhulu kakhulu. Izikuta zokukhahlela ezisebenza ngogesi zehlukile kwezokuhamba ngezikuta ngoba nazo zivumela ukuqhuma komuntu, futhi azinawo amagiya. Ibanga ngokujwayelekile lihluka kusuka ku-5 kuye ku-50 km (3 kuye ku-31 mi), futhi ijubane elikhulu licishe libe ngama-30 km / h (19 mph).
Isikuta Sikagesi JB520
Isikuta Sikagesi JB516B
Isikuta Sikagesi JB525
Isicathulo seBounce JB166
Ukubhucungwa kweGun JB80010
Ukubhucungwa Isibhamu JB8009
Ukubhucungwa Isibhamu JB8008
Konke esikunikele ku-JOYBOLD IS mayelana nokuhamba.we kungukuqalwa futhi siyaphayona njengophawu lwezikuta zikagesi e-china sibeka ukukhathazeka okwengeziwe kwimfashini yokudala yokuphila, ukuhlangabezana nezidingo hhayi kuphela empilweni yakho, kepha nokuthunywa kweplanethi yethu enhle ukuphishekela ukuvikelwa kwemvelo.